Van de Beek oo ka hadlay ujeedkiisa ugu weyn kooxda Man United ee xilli ciyaareedkan – Gool FM
(Manchester) 25 Sebt 2020. Xiddiga heerka caalami ee dalka Holland iyo kooxda Manchester United ee Donny van de Beek, ayaa ka hadlay ujeedkiisa ugu weyn ee Red Devils xilli ciyaareedkan.
Donny van de Beek oo 23 jir ah ayaa ugu biiray kooxda Manchester United suuqan xagaaga adduun dhan 39 million euros, wuxuuna kaga soo biiray naadiga reer Holland ee Ajax Amsterdam.
Wargeyska caalamiga ah ee “Goal” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Donny van de Beek, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Had iyo jeer waxaan ku kalsoonahay naftayda, waana hubaal in markasta aad fiicnaan karto, mar walbana waan ku dadaali doonaa inaan qaado talaabooyinkan waana sii wadi doonaa sidaas”.
“Waxay aheyd talaabo fiican inaan ka soo dhaqaaqo Ajax oo aan imaado Manchester United, hadana waxaan doonayaa wax badan, waxaan doonayaa inaan kooxda ka caawiyo inay ku guuleysato koobab, waan u dagaalami doonaa wax walba”.
Si kastaba ha noqotee Donny van de Beek ayaa dhaliyay gool, kulankii Manchester United ay kala kulantay Crystal Palace guuldarro 1-3 ah, ciyaartii ka tirsaneyd kulamada isbuuca labaad ee horyaalka Premier League.